Wuxuu raadiyaa Kaliforniya oo Qulquleysa iyadoo Mareykanka uu Dib u Furayo Safarkii Caalamiga ahaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Wuxuu raadiyaa Kaliforniya oo Qulquleysa iyadoo Mareykanka uu Dib u Furayo Safarkii Caalamiga ahaa
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Kaliforniya caanka ah
Dhoofinta No.1 ee Kaliforniya waa safar caalami ah, waxayna diyaar u tahay inay dib u guuxdo ka dib markii Mareykanku ku dhawaaqay jadwalka dib loogu furayo xuduudaheeda booqdayaasha la tallaalay. Ku -dhawaaqistu waxay hurisay raadinta safarka iyo ballansashada safarka, taas oo u sii iftiiminaysa maalmo ifaya oo soo socda warshadaha safarka iyo dalxiiska ee gobolka.
Aqalka Cad ayaa ku dhawaaqay Sebtember 20 in booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay ay u duuli karaan Mareykanka sida ugu dhakhsaha badan Noofembar.
Dadka socotada ah ayaa durbadiiba bilaabay inay raadiyaan inay ballansadaan safarada qulqulaya shirkadaha diyaaradaha ee Yurub iyo goobaha ballansashada safarka.
British Airways waxay soo warisay in 700% ay kordheen raadinta safarrada Los Angeles, Skyscanner ayaa arkay 54% kororka booqashooyinka macaamiisha doonaya inay booqdaan Mareykanka.
Solutions Media Solutions Group waxay soo wariyeen xiisaha sii kordhaya ee safarada San Francisco, in ka badan laba jibaarista taraafikada maalin gudaheed markii lagu dhawaaqay furitaanka xadka.
“Kaliforniya waxay diyaar u tahay inay soo dhoweyso saaxiibbadeenna ka kala yimid daafaha dunida, magaalooyinkeenuna waa rogaya rooga cas oo ah kuwo badan oo cusub oo kaliyaKhibradaha California si aad u ogaato, ”Booqo Madaxweynaha California iyo maamulaha Caroline Beteta. "Waxaa jira dalab aad u badan oo ku-talagal ah hab-nololeedka Kaaliforniya, waxaanan filaynaa inaan aragno ganacsigan oo dib u guuxaya."
Socotada caalamiga ahi waxay ka mid yihiin martida ugu macaashka badan California: Waxay sii dheeraadaan oo kharash badan qaataan, waxayna safraan badhtamaha usbuuca iyo xilliyada ugu sarreeya. Sanadka 2019, booqdayaasha caalamiga ahi waxay ku kharash gareeyeen $ 28 bilyan California, iyagoo siinaya hab -nololeed shaqaalaha California iyo dakhli canshuureed oo muhiim u ah bulshooyinka gobolka oo dhan.
Kaalifoorniya waa meesha 1aad ee loo maro Maraykanka, socotada caalamiga ahi aad bay muhiim ugu yihiin gobolka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee laga soo galo:
Magaalada Los Angeles, booqdayaasha caalamiga ahi waxay ahaayeen 56% dhammaan kharashyada dalxiiska kahor masiibada.
“Ku dhawaaqista in booqdayaasha caalamiga ah ay mar kale awoodi doonaan inay booqdaan Mareykanka bisha Nofembar waa tallaabo weyn oo horay loogu qaaday sheekada soo laabashada ee Los Angeles,” ayuu yiri Madaxweynaha Dalxiiska & Maamulaha Los Angeles Adam Burke. “Soo -booqdayaasha caalamiga ahi waxay matalaan mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan suuqa LA - sannadka 2019 oo keliya, waxaan soo dhaweynay rikoor 7.4 milyan oo marti ah oo ka kala yimid daafaha dunida. Ma aha oo kaliya booqdayaasha caalamiga ah inay leeyihiin saameyn dhaqaale oo weyn, waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​dhaqankeenna firfircoon oo kala duwan mana laga yaabo inaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno socdaaladan ku soo laabashada Magaalada Malaa'igtayda. ”
Sannadka 2019, booqdayaasha caalamiga ahi waxay xisaabiyeen 12% dhammaan kharashaadka dalxiiska ee Anaheim iyo 33% dhammaan kharashaadka dalxiiska ee Degmada Orange.
“Iyada oo Degmada Orange ay soo dhaweynayso 4.6 milyan oo booqdeyaal caalami ah sannadka 2019, waxay hoosta ka xarriiqaysaa awoodda dhaqaale ee socdaalka caalamiga ah iyo doorka ay ka ciyaari doonto soo kabashada dhaqaalaha Anaheim,” ayuu yiri Junior Tauvaa, Madaxa Sarkaalka Iibka, Booqo Anaheim. "Hoyga jardiinooyinka mawduucyada heer caalami ah iyo dukaamaysiga, Anaheim iyo Orange County waxay sii ahaan doonaan bar-tilmaameed adag oo loogu talagalay booqdayaasha caalamiga ah."
SILSILADA TALOOYINKA WEYN
In Greater Palm Springs, booqdayaasha caalamiga ahi waxay xisaabiyeen ku dhawaad ​​10% dhammaan kharashyada dalxiiska kahor masiibada, ama in ka badan nus bilyan doolar sanadka 2019.
"Waxaan diyaar u nahay oo ku faraxsannahay inaan si ammaan ah u soo dhaweyno booqdayaasha caalamiga ah," ayuu yiri Booqashada Greater Palm Springs Madaxweynaha & Maamulaha Guud Scott White. “Soo noqoshada dhacdooyinkii saxeexayaga - laga bilaabo usbuuca casriga ah, muusigga iyo xafladaha filimada ilaa dhacdooyinka isboortiga sida BNP Paribas Open, iyo hoteello badan oo dhowaan la dayactiray, weligeed ma ahayn waqti ku habboon in la booqdo Greater Palm Springs.”
Magaalada San Diego, booqdayaasha caalamiga ahi waxay xisaabiyeen 24% dhammaan kharashyada dalxiiska kahor masiibada.
"Waan ognahay sida socdaalka caalamiga ahi muhiim ugu yahay caafimaadka guud ee dhaqaalaha dalxiiska ee San Diego, waxaan kaloo ognahay in socdaalayaasha caalamiga ahi ay guuxayaan inay ku soo laabtaan San Diego," ayay tiri Madaxweynaha Maamulka Dalxiiska San Diego & Maamulaha Guud Julie Coker. “Dhab ahaantii, British Airways waxay dhawaan ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto adeeggeeda aan joogsiga lahayn ee sannadka oo dhan inta u dhexeysa Madaarka Heathrow ee London iyo Madaarka Caalamiga ah ee San Diego sababta oo ah baahida loo qabo. In kasta oo aan weli waddo dheer u soconno si aan ugu laabanno lambarradeenna ka hor-faafidda, tirooyinka rakaabka hawada ee caalamiga ah ayaa sii kordhaya waxayna kor u dhaafeen 140% bishii Agoosto laga soo bilaabo sannadkii hore. ”
San Francisco, booqdayaasha caalamiga ahi waxay xisaabiyeen 62% dhammaan kharashyada dalxiiska kahor masiibada.
Joe D'Alessandro, Madaxweynaha Ururka Socdaalka San Francisco iyo Maamulaha Guud ee San Francisco . "Dadku waxay ku faraxsan yihiin inay soo booqdaan oo ay la kulmaan magaaladeena quruxda badan ee cunnada karinta, dhaqanka iyo dhacdooyinka, mana sugi karno inaan dib u soo dhaweyno."
Khibradaha caanka ah ee San Francisco iyo kala duwanaanshaha soo dhaweynta ayaa sugaya booqdayaasha, iyo sidoo kale soojiidashada cusub, hoteellada iyo maqaayadaha la furay 18kii bilood ee la soo dhaafay. Goobta cuntada ee magaalada waxaa lagu beddelay kor u kaca ikhtiyaarrada alfresco hadda oo “baarkinno” ay noqdeen joogto.
Jadwalka dhacdooyinka iyo bandhigyada oo buuxa waxaa ka mid ah “Iftiimiya SF,” xafladda iftiinka farshaxanka ee bilaha-dheer ah; "Gacaliye San Francisco," oo ah oday cusub oo acrobatic u ah San Francisco oo ku yaal Club Fugazi, goobtii hore ee halyeeyga "Beach Blanket Babylon," iyo "BratPack," waayo-aragnimo masraxeed toos ah oo loogu dabbaaldegayo filimada '80s' ee ay soo bandhigeen Feinstein wuxuu ku yaal Nikko.